ပရိသတ်တွေအတွက် ရွှေလော့ ကတ်နဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ မဲဖောက်ပေးသွားမယ့် ပွင့်နဒီမောင် – XB Media Myanmar
ပရိသတ်တွေအတွက် ရွှေလော့ ကတ်နဲ့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ မဲဖောက်ပေးသွားမယ့် ပွင့်နဒီမောင်
ဟိုးအရင်အချိန်ကတည်းက ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ြ ဖစ် တဲ့ပွင့်နဒီမောင်ကတော့ အခုချိန်မှာဆိုရင်လည်း ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ၊ အခြားအနုပညာလှုပ် ရှားမှုတွေနဲ့ ပရိသတ်ရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူတစ်ယောက်ပါ။ လတ်တလော ကိုဗစ်ကာ လမှာတော့ သရုပ်ဆောင်ထူးခြားနဲ့အတူ စပါယ်ရှယ်ဝက်နံရိုးဟင်းလျာတွေကို ရောင်းချပေး လျက်ရှိပါတယ်။
ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ရအောင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ တနေ့တာအကြော င်းအရာလေးတွေ မျှဝေပေးနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှာတော့ ပရိသတ်တွေအတွက်ထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
“စိတ်ကူးပေါက်လို့ မနက်ဖြန်ည7:00 live ပြောရင်း ကံစမ်းမဲဖောက်ကြမယ်လေ.. မေးခွန်းက (၁၀) ခု… လွယ် လွယ်လေးပဲမေးမှာ… စီမီးရဲ့ အကြောင်းပဲမေးမှာနော်…. ခုပေါက် ခုပို့ပေး မယ်… ပြီးတော့ covid ကာလမှာ စီမီးသိထားတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုလည်း ပြောကြမယ်ေ လ… အိုကေနော်” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေအတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးကို မျှဝေခဲ့ပါတ ယ်။
သူ့ရဲ့ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာတော့ ရွှေလော့ကတ်၊ ဖုန်းဘေလ်နဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အလှ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပိတ်စတို့ကို မဲဖောက်ပေးသွားမှာပါ။ ပွင့်နဒီမောင်ကတော့ မေးခွန်းလေးတွေကို လွယ်လွယ်လေးတွေပဲမေးသွားမှာဖြစ်ပြီး အခုပေါက် အခုပို့ပေးမှာဆိုတော့ မနက်ဖြန်ည (၇)နာရီ လက်မလွှတ်တမ်း စောင့်ကြည့်ပြီး မေးခွန်းလေးတွေဖြေလိုက်ရအောင်နော်။
ဟိုးအရငျအခြိနျကတညျးက ပရိသတျအားပေးမှုအခိုငျအမာရရှိခဲ့တဲ့သရုပျဆောငျ တဈယော ကျွ ဖဈ တဲ့ပှငျ့နဒီမောငျကတော့ အခုခြိနျမှာဆိုရငျလညျး ဇာတျလမျးတှဲတှေ၊ အခွားအနု ပညာလှုပျ ရှားမှုတှနေဲ့ ပရိသတျရှပွေ့နျလညျရောကျရှိလာသူတဈယောကျပါ။ လတျတ လော ကိုဗဈကာ လမှာတော့ သရုပျဆောငျထူးခွားနဲ့အတူ စပါယျရှယျဝကျနံရိုးဟငျးလြာတှေ ကို ရောငျးခပြေး လကျြရှိပါတယျ။
ပရိသတျနဲ့အဆကျအသှယျမပွတျရအောငျ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ တနတေ့ာအကွော ငျးအရာလေးတှေ မြှဝပေေးနသေူတဈယောကျဖွဈပွီး ဒီနမှေ့ာတော့ ပရိသတျတှအေတှကျထူးထူးခွားခွားအစီအစဉျလေးတဈခုပွုလုပျထားကွောငျး မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
“စိတျကူးပေါကျလို့ မနကျဖွနျည7:00 live ပွောရငျး ကံစမျးမဲဖောကျကွမယျလေ.. မေးခှနျးက (၁၀) ခု… လှယျ လှယျလေးပဲမေးမှာ… စီမီးရဲ့ အကွောငျးပဲမေးမှာနျော…. ခုပေါကျ ခုပို့ပေး မယျ… ပွီးတော့ covid ကာလမှာ စီမီးသိထားတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတဈခုကိုလညျး ပွောကွမယျေ လ… အိုကနေျော” ဆိုပွီး ပရိသတျတှအေတှကျပွုလုပျထားတဲ့အစီအစဉျလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတ ယျ။
သူ့ရဲ့ကံစမျးမဲအစီအစဉျမှာတော့ ရှလေော့ကတျ၊ ဖုနျးဘလျေနဲ့ မိနျးကလေးတှအေတှကျ အလှ ကုနျပစ်စညျးနဲ့ ပိတျစတို့ကို မဲဖောကျပေးသှားမှာပါ။ ပှငျ့နဒီမောငျကတော့ မေးခှနျး လေးတှကေို လှယျလှယျလေးတှပေဲမေးသှားမှာဖွဈပွီး အခုပေါကျ အခုပို့ပေးမှာဆိုတော့ မနကျဖွနျည (၇)နာရီ လကျမလှတျတမျး စောငျ့ကွညျ့ပွီး မေးခှနျးလေးတှဖွေလေိုကျရ အော ငျနျော။
ဓာတ်ပုံထဲက မိန်းမဝတ်ထားတဲ့ယော ဂီထဘီက သူကိုယ်တိုင်ချုပ်ပေးထား တာပါလို့ အကြွားပိုလိုက်တဲ့ ကိုပေါက်